Akụkọ - okpu 30 kachasị ịwụ maka ụdị niile, oge na mmefu ego na 2021
Ahụike ụmụ nwanyị nwere ike rụpụta ọrụ site na njikọ ndị dị na ibe a, mana anyị na-egosipụta ngwaahịa anyị kwenyere na ya. Gini mere anyị ji tụkwasị anyị obi?
Abịa n’ihe gbasara ejiji, okpu ịwụ na-abịa dị ka ifufe. Site na okpu ịwụcha nke Britney Spears na 90s ka ọ dabara adaba dị ka onyinye gimmick na mbido afọ 2000, ma ugbu a n'okporo ụzọ (na TikTok n'ozuzu ya), okpu ịwụ abụghị naanị ihe ejiji mana ọ na-atọkwa ụtọ iyi- - Ha dikwa oke uru. Ma ị na-achọ ụzọ mara mma iji chebe onwe gị pụọ na anyanwụ n'ụsọ osimiri, ma ọ bụ na ịchọrọ ngwa ngwa mgbakwunye iji tinye mmasị na uwe jeans na T-shirt na-esote, enwere nhọrọ maka ụdị niile ịwụ ịwụ (wepụtara n'aka mmadụ ruo mgbe ihe dị ka otu ọnwa gara aga, ọ na-emegide nnukwu ịwụ).
Ọ bụrụ n'ị na-achọ oge gboo, ịlaghachi azụ, ị nwere ike ịhọrọ okpu intarsia crochet, nke na-arịọ ka ijikọta picnics na sundresses. Ma ọ bụ ikekwe ịchọrọ iyi ihe ntakịrị ntakịrị mgbe ị na-apụ n'abalị-ị ga-eleba anya okpu ịwụ ahụ. Enweghi ike inweta usoro igwe zuru ezu? Okpu okpu a na-acha ọla edo na-eti mkpu aha gị. O nwedịrị okpu ịwụ mmiri nke na-amị mmiri nke emebere maka ndị na-agba ọsọ ogologo (ọ dịkwa mma maka ụbọchị mmiri mmiri ọsụsọ!) Na okpu ịwụ ajị ajị anụ emere maka ndị na-agbanye ịwụ bọket n'oge niile.
Bọketị ịwụ bụ ụdị ejiji ọhụụ ga - enwerịrị. Ọ bụ ezie na ị nwere ike itinye ego na ihe okomoko, akụkụ kachasị mma bụ na ọtụtụ n'ime ha nọ n'okpuru $ 20, nke na-eme ka ha bụrụ ihe mgbakwunye na mgbakwunye na uwe ọ bụla n'ime mmefu ego Thezọ kachasị. Ndị a bụ okpu ịwụ kacha mma ị nwere ike nweta ugbu a:
Ee, nke a ga-eme ka onye ọ bụla na-ele gị anya ọchị, mana tụlee etu ị si maa mma, ọ ga-emekwa gị otu ihe ahụ.
Enwere agba 32 ịhọrọ site na ya, ya ejula gị anya ma ọ bụrụ na inwee ọtụtụ agba na kọbọd ngwa gị. (Nwere onwe gị ịmalite site na mpempe abụọ, ka gị na BFF nwekwara ike were selfie kwekọrọ na ya.)
Ihe mkpuchi ahụ na-acha uhie uhie na-eme ka ndụ 90s dị njọ, mana imepụta ihe dị mfe na-eme ka ọ bụrụ okpu mara mma nke ị nwere ike dakọtara na ihe ọ bụla. Osisi ahụ siri ike, nke siri ike dịkwa mma maka nchebe anyanwụ.
Okpu ịwụ dị mfe na kpochapụwo bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị ga - enwerịrị akwa uwe ọ bụla nwere ejiji taa, mana ọ bụrụ na ịmabeghị ma ụdị a ọ dị mma maka gị, mgbe ahụ ị ga - atụfu ihe ọ bụla na okpu ịwụ a bara uru $ 8.
Na 12 kpochapụwo agba agba na Mbipụta ịhọrọ site na, ọ bụ ezigbo ebe na-amalite (ma ọ bụ ịzụlite) gị ịwụ okpu ulo mgwo agha.
Nke a unisex ịwụ okpu nwere a bit nke eke wrinkles na zuru okè maka carefree nchekwa. Na mgbakwunye, ejiri 100% mee ya owu, nke dị mma ma na-eku ume na ihu igwe ọkụ.
Okpu okpu okpu a zuru oke maka ihe ojoo “Oh, ihe ochie a? M tinye ya na, ”lee. Ọbụna ejiri akwa SPF 50 tinye ya, nke na-echebe ntutu gị site na anyanwụ-ọ dabara n'ụzọ zuru oke bikini gị.
O siri ike iguzogide dị ka legulu nke Lululemon na-achọsi ike, okpu ịwụ a nwere akụkụ abụọ nwere nro nwere atụmatụ dị nro nwere akụkụ abụọ nwere akụkụ dị jụụ na nke pụrụ iche yana akụkụ na-adọrọ mmasị na-ebipụta. Dị nnọọ ka uwe egwuregwu ha, okpu a na-eji akara ngosi akara akara nke ika ahụ na akwa ajị ajị ajị, na-eme ka ọ bụrụ ihe ga-adịrị maka oge okpomọkụ ahụ.
Okpu ịwụ mpempe abụọ a na-egosipụta isi ikuku nke London ma zuru oke maka ịse foto nke ụbọchị mmiri ozuzo na BFF.
Ee, enwere ehihie na abalị ịwụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ iyi okpu a na-ebipụta mana ejighị n'aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ anya obi ike, nke a na-acha cherry abụọ / okpu ojii bụ nhọrọ zuru oke. Likechọghị cherị? Ọ bụrụ na ị nwere uto na-anọpụ iche, nke a na-acha ọcha na-acha ọcha ga-adị mma.
I nwekwara ike inwe obi abụọ banyere ụdị ejiji ejiji nke anụ ọhịa na nke anụ ahụ na-agba agba mgbe mbụ ha pụtara, mana kwenyere na m-ehi Mbipụta ga-etolite na gị. Ọ bụrụ n ’ịmalitela amasị ya mgbe ị hụsịrị atụmatụ ya na narị narị vidiyo vidiyo TikTok OOTD, yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye nwere obi ike na-ahụkarị ejiji, ị ga-amara na nke a bụ nkecha ga - enwerịrị.
Emere okpu a ejiri 100% silk velvet mee wee dị nro nke mere na ịnwere ike ihi ụra n'ime ya. Chee echiche ya dika okpu oku ejiri aka mee nke nrọ gi.
Ikwu eziokwu, ịwụ ịwụ ọ bụla nwere ike ịbụ unisex, mana okpu a na-ewu ewu na-eji agba ndị na-anọpụ iche na akara ngosi Adidas mara mma, n'agbanyeghị ụdị gị, ọ nwere ike inye ndị mmadụ egwuregwu egwuregwu, nkecha na ejiji. -enwe mmetụta.
Ọ pere mpe, yabụ gbaa mbọ ka ibu (ma nweta otu ihe maka na onye òtù ọlụlụ gị nwere ike izuru gị nke a).
Okpu okpu a na-agbanwe agbanwe dị fechaa, na-adịgide adịgide na mmiri na-egbochi mmiri, emebere maka ụbọchị kachasị ekpo ọkụ n'èzí. Ogologo abụọ nke anụ ọhịa ahụ nwekwara ike ichebe isi gị na olu gị site na anyanwụ (ma echefukwala itinye sunscreen!).
Uwe a suede a na-emepụta abụghị naanị dabara adaba maka njem, kamakwa ọ na-adọrọ mmasị na ejiji. Ọ bụrụ n'ịchọghị ịnwale ụcha ma ọ bụ usoro na-enwu gbaa, nke a bụ ụzọ dị mma iji nweta ihe pụrụ iche.
Ọ bụghị ihe nzuzo na ejiji nwere ike ịbụ ụdị mgbasa ozi siri ike. Ihe mkpuchi ịcha uhie a na-acha uhie uhie nke nwere "Ike Nye Ndị Mmadụ" bụ ihe atụ kachasị mma.
Eeh, ọ dị oke mma, mana akụkụ kachasị mma bụ na ịzụrụ okpu a, ị na-akwado akara nke na-enyere aka iwulite ahịa ejiji dabere na nwata ojii.
Gosi ndị enyi gị na mpako na nọmba a na-egbukepụ egbukepụ, site na ngagharị gaa na nnọkọ oriri na ọ virtualụ virtualụ gị, ọ ga-adọta anya (ma ọ bụ anọ). Kedu ụzọ ọ bụla, ibe a na-arịọ maka ebe gị na ntanetị Insta.
Ọ bụrụ na snow anaghị akwụsị ịhụnanya gị maka okpu ịwụ, mgbe ahụ nke a bụ ihe kwesịrị. Faux fur aghọwo ezigbo ewu ewu, mana agba ya neon na-eme ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ (ma dịkwa mma!).
Site na ịrị elu nke egwuregwu ejiji na oge ezumike, Nike abụrụla otu n'ime ụdị ndị kachasị ewu ewu. Ikpokọta ha iconic logo na ịwụ okpu, ụfọdụ kpochapụwo Millennium pinks na tie-dai, na i nwere a ga-enwe.
Daashi: Ọ nwere a jụụ ajirija gbalaga n'ime, nke bụ nnọọ adabara mmega na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ ụbọchị.
Mba, denim abụghị naanị ihe dị mkpa maka uwe ogologo ọkpa. Okpu okpu a bụ nke ejiri 100% mee, nke mere na ọ nwere ike iku ume kpamkpam, na ụdị ejiji na-agbakwunye ihe ọchị, mmetụta na-adịghị mma.
Y’oburu n’inwe onye nwere sketị sket, leggings na bra, nke a bu ihe ichoro ime. Agbanyeghị mgbe ụfọdụ, Mbipụta na-esiri ike iji uwe dabara, agba na-anọpụ iche nke otu ngwaahịa a na-eme ka ọ dị ọtụtụ dịka okpu ịwụ ọcha ma ọ bụ oji oji.
Na na na, n'ihi ya, ọ bụghị kpọmkwem a ịwụ okpu, ma Amazon kasị mma-ere Hairbrella kwesịrị a ebe ọ bụla okpu ndepụta. Ezubere okpu mmiri na-ekpuchi satin iji chebe ntutu gị na mmiri na mmiri ozuzo, yabụ ihu igwe agaghị emebi ntutu gị ọzọ.
Akpụkpọ anụ site na isi ruo n'ụkwụ bụ ezigbo echiche mgbe niile, ma ugbu a ọ ga-ekwe omume n'ezie. Ọdịdị dị nro na ọnụ ala dị ala na-emekwa ka ọ na-eku ume.
Ma ị chọrọ igosipụta edozi isi gị zuru oke ma ọ bụ na ị na-achọ okpu ịwụ kachasị mma, okpu a na-acha okooko osisi mara ezigbo mma. Nke a bụ ụzọ dị mma iji tinye (n'ụzọ nkịtị) ụdị ọkụ na uwe gị na-enweghị mbenata ibu gị.
Eeh, ịwụ ịwụ bụ ihe dị ka afọ 90, mana ọ bụrụ n'ịchọrọ iweghachi ya n'ile anya, ụdị ịwụ ịwụ a ifuru dị ezigbo mma ma bụrụ maka ọkụ na-esote gị.
Nke a na ịwụ okpu crocheted na nwere adụ imewe. Ọ dị ka ihe Daphne Bridgerton ga-eyi mgbe ọ na-akpakọrịta na ogige ahụ, mana ya na akwa jeans, wedges na T-shirts. Odi ezigbo nma na mmanya na egbu.
A na-ejikwa eriri ọla edo dị iche iche ejiri mee ka ihe nlereanya a wee weta ọdịdị na-egbu maramara ma na-egbu maramara.
Ee, nke a dịtụ oke ọnụ. Mana ọ bụrụ na ị na-achọ ngwaahịa nwere ike imepụta nkecha na abalị, ụbọchị 365 n’afọ, nke a bụ ya. N'etiti rivets na akwa akpụkpọ anụ, ọ ga-agbakwunye ihe ọ bụla na uwe.
Ọ bụrụ na-amasị gị okpu mara mma floppy anyanwụ, mana kpọọ mmetụta ha siri ike (na otu o siri sie ike ịnwe ezumike!), Ngwakọ a nke okpu floppy anyanwụ na ịwụ bọket bụ azịza maka ekpere njem osimiri gị.
O nwere akụkụ sara mbara ọzọ, na-eme ya dị ka nche anwụ nke osimiri maka njem. Na mgbakwunye, akwa owu 100% na-eme ka iku ume.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị elu ga - enwe ihe ị ga - eyi n'oge njem, mmega ahụ, wdg, mgbe ahụ akwa akwa Sweety Betty agaghị ahapụ gị. Ọ bụrụ na-amasịkwa agba ojii na akwa uwe, enwere ya na acha anụnụ anụnụ.
Ọ bụrụ na nke a anaghị iti mkpu "mara mma", amaghị m ihe ọ bụ. Okpu okpu a ga - akpali azịza ịnụ ọkụ n'obi sitere n'aka ndị Insta Fans na BFF gị, okpu a ga - agbakwunye ụdị uwe ọ bụla. Na mgbakwunye, ọ nwere aghụghọ nha nha ngbanwe ka ị wee nwee ike ịkekọrịta ya na ndị enyi gị (ịdọ aka na ntị ziri ezi: ha ga-arịọ gị ka ịgbaziri nke a).
Wantchọrọ lookchọta Ọcha Dị Mma N'ime Ego? Okpu ịwụ a erughị $ 20. N’ahịa a, ị ga-achọ ọlaọcha ya na ọla edo ya. Jiri ya ka ị gbakwunye ncha akwa gị na uwe elu T-shirt, ma ọ bụ jikọta ya na uwe mara mma n'abalị wee pụọ.
Ikwesiri ima na mmadu choro okpu ugba nkita a dika onyinye. Ee, onye ahụ nwere ike ịbụ gị.